Ndị họpụtara Hotels
Kedu otu m ga esi aga na Canton Fair?
Na ngosi nke Canton nke 130, ị nwere ike inyefe ndị nnọchi anya China ka ha gaa ngosi na-anọghị n'ịntanetị!
Rịba ama: Ozi ndị a bụ maka Canton Fair oge niile, ọ bụghị Canton Fair nke 130!
Iji gaa Canton Fair, ọkpụkpọ Canton Fair nwere ike inye aka nweta Visa China na Ndebanye aha maka baajị onye zụrụ ahịa.
Na Inkù ahụ, ndị si mba ofesi nwere ike:
Tinye maka Visa na China (Biko jiri nlezianya rịba ama na akwụkwọ ịkpọ òkù nke Canton Fair nyere nwere ike inyere gị aka inweta Visa ndị China, mana ọ dabere na Emlọ Ọrụ Embassy nke China na mba gị)
Nweta baajị edenyere aha na n'efu na Fair site Express Channel.
Ndị na - azụ ahịa ofesi nwere ike itinye akwụkwọ ịkpọ oku na Canton Fair site na:
By Kachasị mma (yerzụ Ọrụ E-Service)
Site na ịkpọtụrụ Canton Fair Call Center, China Foreign Trade Center
Site na ịkpọtụrụ Ọfịs Ndụmọdụ Ndụmọdụ Na-ahụ Maka Ọchịchị na Azụmaahịa nke Embasii (Akụ na ụba na azụmahịa nke Consulate General) nke PR China na mpaghara gị
Site na ịkpọtụrụ Ndi ozo nke China Foreign Trade Center
Site na ịkpọtụrụ Officelọ Ọrụ Nnọchiteanya Canton Fair Hong Kong - (852) 28771318
Site na ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ azụmaahịa mba ofesi China (ụlọ ọrụ) nke gị na ya nwere azụmahịa
(maka ịkpọ oku gọọmentị nyere ikike, biko gbalịa nhọrọ 2.3.4.5,6, ma ọ bụ tinye akwụkwọ maka visa site n'aka ụlọ ọrụ)
Achọrọ m visa ndị China iji gaa Canton Fair?
Onye ọ bụla si mba na -enweghị Iwu enweghị visa nke China, biko tinye akwụkwọ maka visa ndị China (ụdị ọ bụla, nke na -abụkarị "M") Inkù maka Canton Fair tupu ị gawa China.
Nke a bụ ebe ị nwere ike nweta Visa nke China.
Ofesi ahụ ma ọ bụ Consulate General nke PRChina na obodo gị (Missions Overseas). Ala nke ọ bụla dị iche. Biko kpọtụrụ ha iji nweta ozi ndị ọzọ. Ọtụtụ akwụkwọ ederede mana obere ego na-efu.
Agencylọ ọrụ njem mpaghara ma ọ bụ ụlọ ọrụ visa. O nwere ike isiri gị ike ime ya naanị gị. Embassylọ ọrụ ndị nnọchiteanya mba na-achọkarị onye ọrụ ọkachamara iji nyere aka na ngwa visa.
72/144-awa Visa Visa Iwu Mbepụ. (Ajụjụ na Azịza na 72-hour Transit Visa Exemption Policy)
Ndị ọrụ gọọmentị Canton Fair kpọrọ oku naanị aha Aha onye, ​​Nationality, na Company Company. Ọtụtụ mgbe, ọkpụkpọ òkù sitere na ụlọ ọrụ ọ bụla nke China ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa mba ọzọ (ụlọ ọrụ) na-arụ ọrụ maka akwụkwọ visa nke China. Biko jiri nlezianya rịba ama na ịkpọ oku nke Canton Fair nwere ike inyere gị aka inweta Visa ndị China, mana ha niile dabere na ndị nnọchi anya ndị China na obodo gị.
Ndị na-azụ ahịa chọrọ ịhapụ Mainland China gaa Hong Kong, Macau, wee laghachite na Guangzhou, ga-etinyerịrị akwụkwọ maka visa ntinye.
O siri ike ịgbatị visa ahụ ma tinye maka visa ọhụrụ na China. Anyị na-atụ aro iru ya site na ịga Hong Kong.
Ọ bụrụ na ịgbaga China na Visa na-enweghị akwụkwọ China, ị ga-efega Hong Kong.
Ndenye aha na-enweta tiketi n'efu maka Canton Fair na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị Ugbu a!
Akwụkwọ nke aka gị (Paspọtụ nke mba ofesi, HK / Macau Pass-Return Permit, Taiwan Compatriot Travel Certificate, Valid Id dị ka ndị China, ma ọ bụ Akwụkwọ ikike ngafe nke China nwere akwụkwọ ikike mba ofesi karịrị otu afọ);
A pụrụ iji baajị ahụ mee ihe n'ụzọ dị irè maka ọtụtụ nnọkọ; re-ngwa n'ihi ida ma ọ bụ ichefu na-ewere ya ga-ebubo 200RMB; jiri obiọma chebe ya.
Akara baajị ochie ahụ ga-abụ nke na-abaghị uru ozugbo etinyechara ya. Biko hụ na baajị ị na-eyi bụ nke kachasị ọhụrụ.
(300 RMB /ụbọchị gbakwunyere 30 RMB /kaadị ọzọ dị ka ego ọrụ ga-akwụ ma e wezụga igosipụta akwụkwọ achọrọ. Naanị otu onye nnọchi anya mpaghara ka akwadoro maka ụlọ ọrụ ọ bụla dị na mba ofesi ma ọ ga-esonyere ya na mbinye aka nke ndị zụrụ ụlọ ọrụ ndị si mba ofesi)
Akwụkwọ nkeonwe. Gụnye Paspọtụ Ofesi (ọ bụghị akwụkwọ ikike paspọtụ nke China), Hong Kong / Macao Return-Return Permit, or ID Card, Taiwan Compatriot Travel Certificate, akwụkwọ ziri ezi maka ndị mba ofesi China, ma ọ bụ akwụkwọ ikike ngafe ndị China nwere akwụkwọ ikike dị na mba ofesi dị mma maka ihe karịrị otu afọ.
Foto nke onwe onye 5cm X 4cm (ma ọ bụ na-eri ego mgbe aha).
Ọ bụrụ n’inweta kaadị Kaadị IC, ma gwa gị na: Ntinye Ntinye (Kaadị IC) bara uru maka nnọkọ na-abịanụ nke ngosi ahụ, nke na-azọpụta oge gị na ịnweta nnweta dị mfe. Ọ bụrụ n’ichezọ iweta Kaadị ahụ ma ọ bụ tufuo ya, ntinye ọzọ ga-efu gị 200RMB / kaadị dị ka ụgwọ ọrụ.
Zụta Kaadị bụ nanị ukara mbanye Fair na dị na China Import na Export Fair Mgbagwoju. Agbanyeghị, iji chekwaa oge gị ma mee ka ndebanye aha gị nwee ike ijikwa ya, anyị gaziri ụlọ ọrụ ndebanye aha iri anọ na otu nke 31 na họtelu họpụtara. Anyị na-atụ aro ka ị nweta baajị Canton Fair na ụlọ nkwari akụ 31 ndị a, na-atụle elekere ndebanye ndebanye aha nke na-eme site na 9: 30 ruo etiti ehihie na China Import and Export Fair Complex. Ọ bụ ụzọ kachasị mma maka gị, maka ndị na-azụ ahịa na-anọ n'akụkụ ebe ndị a, biko denye aha na họtel.